Faritra Analamanga: mihiboka tanteraka ny asabotsy sy ny alahady | NewsMada
Be loatra ny tratran’ny aretina sy ny lavon’ny coronavirus eto amin’ny faritra Analamanga. Nandray fepetra, araka izany, ny filoham-pirenena : mihiboka tanteraka ny faran’ny herinandro.
Mila tapahina ny rohim-pifindran’ny valanaretina. Nazava ny kabarin’ny filohan’ny Repoblika manoloana izany : mihiboka tanteraka ny faritra Analamanga, ny asabotsy sy ny alahady. Voaporofo mantsy fa miakatra be ny tragan’ny fahavoazana, indrindra ny fahafatesana noho ny aretina coronavirus ato amin’ny Faritra ka nahatonga izay fanapahan-kevitra izay. « Mba hitsinjovana ireo miasa andavanandro no antony. Mitsahatra ny asa fifamezivezena mandritra ireo roa andro ireo. Tsy misy ny fitaterana afa-tsy ny taxi mitondra marary sy mividy fanafody. Tsy misy misokatra afa-tsy ireo toeram-pivarotana tena ilaina toy ny farmasia sy ny tsenakely…”, hoy ny filoham-pirenena tanatin’ny kabariny.
Mikatona ny toeram-pivavahana rehetra
Mitohy hatrany ny fampiharana ny “couvre-feu”, amin’ny 9 ora alina hatramin’ny 4 ora maraina. Mikatona hatrany ny toeram-pisotroana (bar), ny toerana fanaovana lanonana (espace), ny karaoke ary ny toeram-pandihizana. Tsy misokatra ihany koa ny toeram-pivavahana rehetra, fa homena alalana manokana hanana fandaharana ao amin’ny haino aman-jerim-panjakana ny fiangonana isan-tsokajiny ka ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina no handrindra izany.
Hapetraka ny “fasan’ny Firaisampo”
Voaporofo fa ny fikirakirana ny razana lavon”ny “coronavirus” no isan’ny manaparitaka haingana ny aretina. Araka izany,tanterahina ny andron’ny nahalavoana ny fandevenana, izay lavo. Mitoetra hatrany fa tsy mihoatra ny 10 ny mpandevina ka hametraka toerana manokana ho an’izany ny fanjakana. “fasan’ny Firaisampo” ny anarany isaky ny distrika, hametrahana ny hasina sy ny haja mendrika ireo lavo, izay tsy afaka misitrika am-pasa ndrazana noho ny fepetra raisina. Ho an’ny eto amin’ny faritra Analamanga manokana, hapetraka izany eny Mandrosoa Ambohitdratrimo sy eny Asabotsy Ambatofotsy.
Nisy ny maty noho ny fahatapahan-jiro
“Takina amin’ny tomponandraikitra isan-tsokajiny ny fahaiza-manao,ny maha matihanina ary ny fandraisana andraikitra ao anatin’ny fotoana fohy. Aina no vonjena. Misy ny aina nafoy noho ny fahatapahan-jiro teny amin’ireo CTC 19. Tsy azo eken’ny saina ireny, ka mitaky ny fametrahana ny “zero coupure” avy amin’ny Jirama…” Mazava izay baiko hentitra avy amin’ny filoha izay.
Tsy misy ny tsena isan-kerinandro
Efa tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra fa miato ny tsena isan-kerinandro, indrindra ato anatin’ny faritra Analamanga. Mbola nanamafy ny filohan’ny Repoblika fa tokony ho olona iray isan-tokantrano ihany no mivoaka miantsena, ary amin’ny 6 ora maraina ka hatramin’ny 5 ora hariva izany. Entanina izay rehetra misy soritra aretina mba tsy hivoaka hiantseina.
Mbola mikatona ny zotra nasionaly
“Fantatro fa te hiasa ireo kaoperativa. Fa noho ny zava-misy dia tsy maintsy miaraka maka fepetra, noho izany dia mbola mikatona ny zotra nasionaly. Ny entana sy ny vokatra kosa no afaka mivoaka ary tsy tokony hisy fanakanana”, hoy hatrany ny filoha. Ho an’ny faritra Analamanga, Boeny, Sava, Atsinanana ary i Nosy Be no mitoetra ity fepetra ity. Manampy izany ny faritra Sofia, araka ny toromariky ny Filoha, satria lasa niakatra be ireo trangan’aretina, noho ireo mpianatra avy any Mahajanga namonjy fodiana.